ब्लग के हो, ब्लगबाट पैसा कसरी कमाउने? - DURBAR TIMES
HomeScience & Technologyब्लग के हो, ब्लगबाट पैसा कसरी कमाउने?
इन्टरनेटमा जानकारी तथा सूचना प्रदान गर्न लेखिने लेख नै ब्लग हाे । जुन इन्टरनेटमा विभिन्न भागहरू मार्फत देखा पर्दछ, जहाँ सल्लाह र प्रतिक्रिया विश्वका सबै ठाउँबाट साझा गर्न सकिन्छ।
समयको चक्रमा सबै परिवर्तन हुँदैछ। इन्टरनेटमा पनि यही लागु हुन्छ। पश्चिमी देशहरूमा बढ्दो परिष्कृत इन्टर्नेट टेक्नोलोजी र द्रुत अनलाइन व्यापारका कारण, व्यवसायको प्रबर्द्धनका लागि विभिन्न वेबसाइट र ब्लगहरू सिर्जना गरिएका छन् र विभिन्न अनलाइन विज्ञापन एजेन्सीहरू र अनलाइन रोजगार एजेन्सीहरूको स्थापना भएको छ।
तपाँइहरू मेराे ब्लगमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ।
कस्ताे भाषा छनाेट गर्ने ?
सकेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ । एडसेन्सजस्तै अन्य केही विज्ञापनदाताले सबै भाषा सपोर्ट गर्छन्, तर प्रचलित विज्ञापनदाताहरू जस्तै गुगलको एडसेन्स तथा माइक्रोसफ्ट अनि याहुले सञ्चालन गरेका एड नेटवर्कहरूले भने नेपाली भाषालाई सपोर्ट नगर्ने हुँदा आफूले कमाउने रकम घट्न सक्छ । त्यसैले सकेसम्म अंग्रेजी वा अरू कुनै प्रचलित भाषा प्रयोग गरेर आम्दानी बढाउन सकिन्छ । तर यदि नेपालीमा ब्लग लेख्नुहुन्छ भने फेसबुककाे इन्स्ट्यान्ट अर्टिकलले नेपाली भाषा स्विकार गर्छ ।
केका आधारमा पैसा कमाउने ? कसरी कमाउने?
Previous articleकुनाबाट चिहाउँदै छन् माधव नेपाल
Next articleबालुवाटारबाट मानवअधिकारकर्मी पहाडीसहित २६ जना पक्राउ